ရှညောသား: January 2018
သစ်ရွက်ကြွေတွေကြားမှာ အခုလိုလေးတွေ ပေါက်နေတာ
ကျောင်းကိုရောက်ကတည်းက ကျောင်းဝန်းထဲ လမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့အခါ သစ်ပင်အောက်တွေရောက်ရင်
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းကြည့်မိတယ်။ မိုးက တစွတ်စွတ်ရွာနေတာမို့ သစ်ဆွေးမြေဆွေးကောင်းတဲ့နေရာဆို
မှိုတွေပေါက်ချင်စရာအခြေအနေမျိုးပေါ့။ မှိုတွေပေါက်တတ်တဲ့ တောတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အတော် အသင့်ရင်းနီးနေသူမို့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအလေ့အထလေးကကိုယ်နဲ့ကပ်ပါနေတယ်။ နောက်တခု သစ်သီးသစ်ပင်တွေကိုလည်း စိုက်ရပျိုးရ ဝါသနာပါတော့ ဒီတခါရောက်တဲ့ကျောင်းက ကိုယ့်အတွက်တော့တကယ့်ကို သာယာပြီး ပြည့်စုံတဲ့နေရာတခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ကျောင်း ဖြစ်တာနဲ့အညီ သစ်ရိပ်ဝါရိပ် အလှစိုက်သစ်ပင် ရာသီအလိုက်ပွင့်တဲ့ပန်းပင် နဲ့ တော်တော်ကိုအမျိုးစုံပြီး
အေးချမ်းလှတဲ့နေရာတခုလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။ စကားဝါ နဲ့ စကားဖြူပင်တွေ ဖူးပွင့်ချိန်များဆို တကျောင်းလုံး
စကားပန်းနံ့တွေကြိုင်လှိုင်နေတော့တာ။ ကျောင်းကနေအဆောင်ကိုအပြန် စကားပင်တန်းတွေအောက်က
ဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါ စကားဝါပန်းနံ့ကို ရှုရှိုက်ရတဲ့အရသာက မြန်မာပြည်က ပုပ္ပားကိုပြန်ရောက်နေသလိုမျိုး
ကျောင်းပိတ်ရက်တနေ့ ကိစ္စတခုနဲ့ အပြင်ကိုသွားဖို့ ဖြတ်နေကျတောအုပ်လမ်းလေးထဲအတိုင်းလျှောက်လာ ရင်းလမ်းဘေးဝဲယာမှာ မှိုတွေပေါက်နေလိုက်တာ တော်တော်ကိုများပါတယ်။ စမြင်ကတည်းက ငှက်ဆွတ်မှို အသေးစားလေးတွေဆိုတာ သိပေမဲ့ စားကောင်းတဲ့မှို ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင်စစ်ရင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ပါလိုက်ကြည့်တော့ မှိုပေါက်နေတဲ့ နေရာကတော်တော်လေး ကျယ်တာကိုတွေ့လိုက် ရတယ်။ ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းပေါ့ မနက်စောစောမှာ မှိုရသည့်မျက်နှာ ဘယ်လိုသာဖြစ်နေမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။ အပြင်သွားဖို့ကလည်း အရေးကြီး ဒီမှိုတွေကိုလည်း ထားခဲ့ရမှာစိတ်မချနဲ့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတုန်း ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအကဲခတ်တော့ တော်ယုံလူသိပ်မရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တာ
ရယ် စေ့စေ့စပ်စပ်မကြည့်လျှင်မမြင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမို့ အသာထားခဲ့ပြီး အပြင်ကကိစ္စကို အပြေးနှင်ပြီး
အပြင်ကအပြန်မှာတော့ မပြေးရုံတမည် ခြေလှမ်းများနဲ့ မှိုတွေရှိရာဆီသို့သာ ဦးတည်ပြီးလျှောက်လာခဲ့တယ်
ထင်တဲ့အတိုင်းတပါးသူတွေမရောက်တာလားမမြင်တာလားမသိမှိုတွေကအသွားတုန်းကလိုပဲခြေရာလက်ရာ မပျက်ပြန်တွေ့ရတော့မှ စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချပြီး အေးအေးဆေးဆေး မှိုနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစပါတော့တယ်။
အပွင့်အနည်းငယ်သေးတာမို့ တပွင့်ချင်း တပွင့်ချင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တွေ့သမျှ အဖူး အငုံ အပွင့် အားလုံးကို ထိုင်နှုတ်လိုက်တယ်။ ညပိုင်းတုန်းကမှ ပေါက်ထားဟန်ရှိလို့ အားလုံးက လတ်ဆတ်နေတော့
နှုတ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ မှိုတွေ အားလုံးနှုတ်ပြီးချိန်မှာတော့ တပိဿာ နီးပါလောက်ရှိတာမို့ဒီလိုစားလို့ ကောင်းတဲ့မှိုမျိုး များများစားစား ဒီတခါရဖူးတာပဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောရင်းအဆောင်ဆီပြန်ခဲ့တယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး ပင်စိမ်းရွက် ငရုတ်သီးစိမ်း တို့နဲ့ အရသာရှိတဲ့ မှို ဟင်းပါ
အဆောင်ရောက်တော့ မိန်းခလေးဆောင်မှာနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသူတွေကို မှိုစားအုံးမလားမေးတော့
ကြတယ်။တချို့ကစားရမှာခပ်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်နေလို့ ဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရဲရဲကြီးအာမခံပြီး ကိုယ်တိုင်အရင်စား ပြတော့မှ စိတ်အေးလက်အေးစားကြတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ညနေစာလည်း မှိုဟင်း နောက်တနေ့ တရက်လုံး
မှိုဟင်း နောက်ရက် မနက်စာပါ မှိုဟင်းနဲ့ စားပစ်လိုက်တယ်။ အညာမှာဆိုရင်တော့ အကျိုးအပဲ့လောက်ပဲ
အိမ်မှာချက်ပြီး ကျန်တာကို ပြေးရောင်းတာပေါ့ ငှက်ဆွတ်မှိုက ဈေးလည်းကောင်းတယ်လေ။ ဒီမှာတော့
ထွက်လည်းမရောင်းတော့ဘူး ကိုယ့်ဘာသာပဲ အ၀ချက်စားလိုက်တော့တယ်။
အညာသားလက်ရာ မှို ဟင်း
အဖေနဲ့အမေ့ဆီဖုန်းဆက်တော့ မှို ရတဲ့အကြောင်း အားပါးတရ ကြွားလိုက်ပါသေးတယ်။ အမေကတော့ မှိုတွေ့တယ်ပြောတော့ မှိုလည်းပေါက်တာပဲလားလို့ မေးလို့ ရယ်နေရသေးတယ်။ နောက်နှစ်တွေလည်း ဒီနေရာမှာ မှို တွေထပ်ပေါက်သေးရင် အညာသားနဲ့ သူတို့ပြန်တွေ့ကြအုံးမှာပေါ့။
ချစ်စွာသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး မှို ရသောမျက်နှာကဲ့သို့ ထာဝရ ပြုံးနိုင်ကြပါစေဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, January 21, 20182comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အညာသားနေတဲ့ အဆောင် ၁၅ ထပ် အခန်းဝရံတာမှမြင်ရတဲ့ ကျောင်းထဲကရေကန်
ကိုငေးပြီးဘယ်ဆီမှန်းမသိလွမ်းမိတယ်။လွမ်းပါတယ်ဆို ကိုရွှေဥသြက ပိုလွမ်းအောင်ဖန်လေသလားမသိ
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, January 07, 20183comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, January 02, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook